Banyere Anyị - Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 2016, amor bụ ọkachamara ọkachamara OEM / ODM na onye na-ahụ maka ngwaahịa na Innovation, nyere gị aka iji mezuo ebumnuche gị, ga-enyekwa ndị mmadụ ndụ ugbu a na teknụzụ ọhụụ.
Na a obere oge nke na-eto eto n'ime a 10 nde USD kwa afọ ahịa itunanya, setịpụrụ mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ na otu nke ọkachamara ndụ eletriki n'ichepụta ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ kpuchiri ebe ihe dịka 10000 square mita, wuru osisi tozuru etozu, rụpụta nke 5000 nkeji, ngwaahịa sitere na ịzụrụ akụrụngwa, ma ọ bụ usoro mmepụta ngwaahịa na ule dabere na mba na sistemụ asambodo ogo mba ụwa iji mejuputa; ugbu a anyị na ngwaahịa na-exported ka Asia, Africa, Europe na United States na kọntinent nke mba na mpaghara,
Zhongshan Amor Ọdụdọ ngwa oru Co., Ltd. banyere n'ime nkwekọrịta ka jikota na Foshan Shunde North Conductor Industry Co., Ltd .. 20 nde USD kwa afọ ahịa. Njikọ ahụ mere na Jenụwarị 1st, 2019 mgbe oge azụmahịa gachara. ebe mepere dika Foshan Shunde North Conductor Industry Co., Ltd. Shunde Branches: - China gbara uzo mgbanaka abuo nke abuo, ulo amamihe nke isii.
Nkwupụta ọhụụ nke amor na-enyere anyị aka ịnapụta “otu-nke-a-ụdị” ngwọta na-eme ka ndị ahịa anyị nwee ihe ịga nke ọma na uto - na-ekepụta ahịa ahịa ọhụrụ bara uru maka anyị na ndị mmekọ anyị. Anyị ga-akpọrọ ndị ahịa anyị na ndị mmekọ anyị karịa ngwaahịa na ike ha. Anyị ga-akpali echiche ọhụrụ site na teknụzụ:
Amor na-agbanwe ụzọ otu nzukọ si etinye aka na ozi site na teknụzụ ejikọtara. Site na ịnye nnukwu akwụkwọ mpịakọta nke njikwa akwụkwọ mmeri na ngosipụta ngosipụta, Amor na-enyere ndị azụmaahịa aka ịmepụta, jikwaa, jiri anya nke uche ma kesaa ozi, na-eme ka o kwe omume inyocha echiche na ịmekọrịta na ụzọ ọhụrụ. Site na Innovation ohuru rue ihe nlekota oru ederede, Amor na-agbasawanye teknụzụ ụlọ ọrụ, ọrụ na nkwado ka emebere iji mee ka ozi karia ihe omuma, ihe omumu, nke bara uru ma dikwa nfe inweta, echiche di egwu site na teknụzụ.